Nnwom 65 NA-TWI - Ayeyi ne aseda - O Onyankopɔn, eye sɛ - Bible Gateway
Nnwom 64Nnwom 66
Nnwom 65 Nkwa Asem (NA-TWI)
65 O Onyankopɔn, eye sɛ yɛkamfo wo wɔ Sion, na yedi bɔ a yɛhyɛɛ wo no so 2 efisɛ, wutie mpaebɔ. Nnipa a wɔwɔ mmaa nyinaa bɛba wo nkyɛn 3 wɔ wɔn bɔne ho. Yɛn bɔne di yɛn so nkonim, nanso wode kyɛ yɛn. 4 Nhyira nka wɔn a wuyi wɔn ma wɔbɛtena wo Kronkron mu Kronkron hɔ. Nneɛma pa a ɛwɔ wo fi hɔ no bɛsɔ yɛn ani, nhyira a ɛwɔ wo fi kronkron hɔ no. 5 Wonam nkonim a woma yedi so bua yɛn, na woyɛ w’anwonwade de gye yɛn nkwa. Nnipa a wɔwɔ wiase mmaa nyinaa ne wɔn a wɔwɔ ɛpo so akyirikyiri nyinaa de wɔn ho to wo so.